ကြက်ဥစက် | ကြက်ဥ ပြုပြင်ရေး စက်ရုံနှင့် စက် | SANOVO
မြေသြဇာဥ ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း စက်ရုပ်အလိုအလျောက်စနစ် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများကို အခြောက်ခံခြင်း နှင့် ပါစူရီပြုခြင်း ဥမွေးမြူ ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်ခြင်း။ ဇီဝလုံခြုံရေးနှင့် အစားအစာဘေးကင်းရေး အဖွဲ့စာမျက်နှာသို့ ပြန်သွားရန်
ထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဖြေရှင်းချက် စက်ရုပ်ဖြေရှင်းနည်းများ ဖြေရှင်းချက်များအား လုပ်ဆောင်နေသည်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းများ
ဝန်ဆောင်မှု နည်းပညာနှင့်ပတ်သက်သောအထောက်အပံ့ အပိုပစ္စည်းများ လေ့ကျင့်ရေး SANOVOစောင့်ရှောက်မှုသဘောတူညီချက်များ
အာဖရိကတိုက် အာရှတိုက် ၾသစေတးလ် ဥရောပ မြောက်အမေရိက တောင်အမေရိက
စားပွဲတင်ကြက်ဥများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် စီမံခြင်းအတွက် စက်မှုထိပ်တန်းနည်းပညာ
စားပွဲတင်ကြက်ဥထုတ်လုပ်သူများသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ကြက်ဥများထောက်ပံ့ပေးသည် - မကြာခဏ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ လူသားများအတွက် အသက်အာမခံချက်ရှိသော အစားအစာအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။ ဒီထဲမှာ ငါတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့် အတိအကျကိုက်ညီသော ကြက်ဥကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများကို သင့်အား လုံခြုံ၊ ထိရောက်ပြီး ချောမွေ့စွာထုတ်လုပ်ရန် သေချာစေပါသည်။ သင့်တွင် အသေးစား၊ အလတ်စား သို့မဟုတ် အရွယ်အစားကြီးမားသော ကြက်ဥထုတ်လုပ်ခြင်းရှိပါစေ၊ သင့်ပရောဂျက်တစ်ခုလုံးအတွက် သင့်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ ကြက်ဥအနှစ် 60 ကျော်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်သည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် ယုံကြည်ရသော ပါတနာကို အားကိုးပါ။
သင့်ပရောဂျက်သည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်သည်။ SANOVO TECHNOLOGY GROUP. သဘောတူညီချက်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းလိုက်သောအခါ၊ အတွေ့အကြုံရှိ နည်းပညာရှင်များ၊ ပရောဂျက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုမန်နေဂျာများအဖွဲ့သည် သင့်မှာယူမှုကို ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးနည်းဖြင့် ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။
01 - ဖောက်သည်တောင်းဆိုချက်
At SANOVO TECHNOLOGY GROUPသင်၏တောင်းဆိုမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင့်အား ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန်ကြားလာစေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိ နှင့် အထူးသီးသန့် အတိုင်ပင်ခံများကို အမြဲတမ်းခွဲဝေပေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏စျေးကွက်အတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီး ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သော ထုတ်ကုန်များကို မည်သို့ထုတ်လုပ်ရမည်ကို သင့်အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာအသိပညာကို သင့်အနေနှင့် ထားရှိပြီး ဆွေးနွေးပါ။
02 - အတိုင်ပင်ခံ
အကောင်းဆုံးသော နည်းပညာဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို လုံခြုံစေရန် သင်၏တောင်းဆိုမှုအပေါ် သင့်အား ဆွေးနွေးပြီး အကြံပေးပါမည်။ အပြင်အဆင်နှင့် အစီအစဥ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သောကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည် သင်နှင့်အတူ အနီးကပ်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံးနှင့် လိုက်လျောညီထွေအရှိဆုံးဖြေရှင်းချက်အပြင် သင့်စက်ရုံရှိ အကောင်းဆုံးအခြေခံအဆောက်အအုံများရရှိရန် စက်ပစ္စည်းများကို ပေါင်းစပ်မည်ဖြစ်သည်။ အခင်း၊ နံရံအကာများ၊ လေဖိအား၊ အလင်းရောင် အစရှိသည်တို့အတွင်း အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အကြံပြုချက်များကိုလည်း ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၀၃ - စာချုပ်
သင်နှင့်အတူအမိန့်တစ်ခုချရန်ဆုံးဖြတ်သောအခါ SANOVO TECHNOLOGY GROUP၊ သင်သည် သင်၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းကို ကမ္ဘာ့စျေးကွက်တွင် အောင်မြင်စေရန် ကြိုးပမ်းပေးမည့် ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့များဖြင့် သီးသန့်ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်လာပါသည်။
04 - စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အနေဖြင့် သင့်တွင် သင့်ပရောဂျက်တွင် လုပ်ဆောင်နေသော အထူးကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့် သီးသန့်ပရောဂျက်မန်နေဂျာတစ်ဦးရှိပါမည်။ ဤအဖွဲ့သည် သင့်ပရောဂျက်ကို သင့်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းထားကြောင်း သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအဆင့်၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် စတင်ချိန်အတွင်း နှင့် အာမခံကာလအတွင်း အရောင်းအပြီးပံ့ပိုးမှုတွင် သင့်အား စီစဉ်သည့်အဆင့်တွင် သင့်နောက်လိုက်မည့် အထူးသီးသန့် ပရောဂျက်မန်နေဂျာတစ်ဦးအား ခွဲဝေပေးမည်ဖြစ်သည်။
05 - တပ်ဆင်ခြင်း၊ စတင်ခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ခြင်း။
စနစ်ကျသောစမ်းသပ်မှုအောင်မြင်ပြီးနောက်, စက်ပစ္စည်းအားလုံးကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့သည်။ SANOVO TECHNOLOGY GROUP. စက်ပစ္စည်းများကို အတွေ့အကြုံရှိသူမှ တပ်ဆင်သည်။ SANOVO TECHNOLOGY GROUP နည်းပညာရှင်များ။ ဤသည်မှာ သဘောတူညီထားသည့်အတိုင်း သင့်စက်ပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး တပ်ဆင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သင့်အာမခံချက်ဖြစ်သည်။ သင့်ခွင့်ပြုချက်ရပါက လက်ခံသဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အာမခံကာလ စတင်ပါသည်။
ကြက်ဥ ထုတ်ကုန်များ မထုတ်လုပ်မီ သင့်ဝန်ထမ်းများကို စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ပေးရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အတွေ့အကြုံရှိပြီး အလွန်ကျွမ်းကျင်သော ထုတ်ကုန်ကျွမ်းကျင်သူများသည် သင့်ဝန်ထမ်းများအား စက်ကိရိယာများလည်ပတ်ရာတွင် လေ့ကျင့်ပေးပြီး စက်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အထွက်များအကြောင်း သင်ကြားပေးပါမည်။
၀၆ - ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ပစ္စည်းများကို တာရှည်ခံအောင်တည်ဆောက်ထားသော်လည်း အခြားအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင် ၎င်း၏အထွတ်အထိပ်သို့ 24/7 စွမ်းဆောင်နိုင်ရန် ဂရုတစိုက်လိုအပ်ပါသည်။
သင့်စက်ပစ္စည်းကို အကောင်းဆုံးသိသောသူများထံမှ ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် သင်သည် စိတ်အေးချမ်းသာမှုကို အပြည့်အဝခံစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ SANOVO ဝန်ဆောင်မှုကို သင်နှင့် သင့်အဖွဲ့အစည်းအား စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် စက်ရပ်ချိန်ကို အနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာ အသိပညာဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရန် ဝန်ဆောင်မှုကို ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
SANOVO TECHNOLOGY GROUP ကမ္ဘာ့ဒေသအားလုံးတွင် ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးသီးသန့်၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဝန်ဆောင်မှုဝန်ထမ်းများသည် အမြဲတမ်းလွယ်ကူစွာရောက်ရှိနိုင်ပြီး သင့်အရေးပေါ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် သို့မဟုတ် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလည်ပတ်မှုများကို ပံ့ပိုးပေးရန် အသင့်ရှိနေပါသည်။
ကြက်ဥကို ဘယ်လို စီမံမလဲ။
ကြက်ဥပရိုဆက်ဆာအဖြစ် သင့်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကြက်ဥပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတအားလုံးကို လက်စွဲစာအုပ်တွင် စုစည်းထားပါသည်။
ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင် ကြက်ဥပြုလုပ်ခြင်းတွင် အဆင့်အားလုံးကို ရှင်းပြပါမည်။
အသေးငယ်ဆုံးသော အပိုပစ္စည်းကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းမှ တစ်သက်တာ စွမ်းဆောင်ရည် ပါတနာဖြစ်ခြင်းအထိ အရာအားလုံးအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ အများဆုံးအလုပ်လုပ်ချိန် - အထွက်နှုန်းမြင့်မားခြင်း - မြှင့်တင်ထားသောထုတ်ကုန်အရည်အသွေး - တစ်နေ့တာလုံး - သင့်လုပ်ငန်းကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အသိပညာမှ SANOVO ဝန်ဆောင်မှုက ဒီပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင် ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
ဆန်းသစ်သော စက်ကိရိယာများဖြင့် အလုပ်သမားစိန်ခေါ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ခြင်း။
ဘယ်လိုအကြောင်းကိုဖတ်ပါ Valley Park Farm သြစတြေးလျရှိ လယ်ယာများနှင့်ဆက်စပ်သော အလုပ်သမားဈေးကွက်စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်အတွက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနည်းပညာတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။
OVO Egypt စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းကို ပြောင်းလဲခြင်း။
၏ပစ်လွှတ်မှုအကြောင်းကိုဖတ်ပါ။ OVO Egyptအီဂျစ်၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် မြောက်အာဖရိကတို့တွင် စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းကို ပြောင်းလဲပစ်ရန် မျှော်လင့်ထားသည့် ကိုင်ရိုရှိ အပြည့်အဝ အလိုအလျောက် ကြက်ဥပြုပြင်သည့် စက်ရုံအသစ်။
“ကျွန်တော်တို့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို အရမ်းကျေနပ်ပါတယ်။ SANOVO TECHNOLOGY GROUP"
အကြောင်းကို Read Dava Foodsနှင့် 'အတွေ့အကြုံ SANOVO GraderPro
ဆန်းသစ်သော ကြက်ဥ-ပါဝင်ပစ္စည်း ပေးသွင်းသူမှ အရည်ကို ပြုပြင်ခြင်း။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ AbE Discovery အစပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်။ SANOVO pasteurizer များနှင့် တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၎င်းတို့၏မျှော်လင့်ချက်အားလုံးကို ကျော်လွန်သွားပုံ။
"ငါ့အတွက် SANOVO ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များအတွက် အဖြေရှာပေးသော ဖောက်သည်များကို အာရုံစိုက်သည့် ပထမဆုံးသော ကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။"
Bill Rehm ၏ပိုင်ရှင် (ပိုင်ရှင်) အကြောင်းဖတ်ပါ။ Daybreak) SANOVO စက်တွေက သူ့ထုတ်လုပ်မှုကို ထိခိုက်စေတယ်။ Breakers၊ Graders နှင့် Farmpackers အပါအဝင် ဤစက်များ။ ဘီလ်က ၎င်း၏အတွေ့အကြုံနှင့်ပတ်သက်သည့် ဗီဒီယိုတစ်ခုတွင် စကားပြောဆိုသည်ကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် စိတ်အားတက်ကြွစေပါသည်။ SANOVO.
Baltics တွင် အကောင်းဆုံး အတန်းစား ကြက်ဥ ပြုပြင်ခြင်း
အကြောင်းကို Read Groward Groupလစ်သူယေးနီးယားရှိ ၎င်းတို့၏ ကြက်ဥအရည် စီမံဆောင်ရွက်ပေးသည့် စက်ရုံ၏ ပြန်လည်မွမ်းမံရေး ပရောဂျက်။ Groward Group ဥရောပဒေသရှိ ငါးထွက်ကုန်ထုတ်လုပ်သူ အများအပြားရှိသည့် Viciunai Group ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
လုပ်သားစရိတ် ၅၀% လျှော့၊
ပိုင်ရှင် Mr Lemmers ၏ဘယ်လိုအကြောင်းဖတ်ပါ။ Global Food Groupအင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် သူ၏လုပ်အားခကို ၅၀% လျှော့ချခဲ့သည်။
"မြင့်မားသော စံချိန်စံညွှန်းဖြင့် ပါစူရီပြုလုပ်ခြင်း"
ဘယ်လိုအကြောင်းကိုဖတ်ပါ Koppenhöfer Eiprodukte GmbH သည် စွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးမြင့်စေပြီး လုပ်အားအချိန်ကို သက်သာစေနိုင်သည်။ SANOVO pasteurizer။
ခေတ်မီဆန်းသစ်သော ကြက်ဥ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အဆောက်အဦ
ဘယ်လိုအကြောင်းကိုဖတ်ပါ Sanovo Ovotrack ၏ မဟာဗျူဟာမြောက် မဟာမိတ်အဖွဲ့သည် တန်ဖိုးကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ Star Egg၏ထုတ်လုပ်မှု။
"ကျွန်တော်အကြံပြုသည်မှာ SANOVO. သူတို့နဲ့ တွေ့ကြုံရတဲ့ အတွေ့အကြုံက သူတို့နဲ့ တွဲလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ အသင်းပါ”
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Prairie Star Farms နောက်တစ်ခုဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ SANOVO OptiBreaker
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပင်မကတ်တလောက်ကို ကြည့်ရှုပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်ကမ္ဘာကို လေ့လာကြည့်ပါ။
ဝန်ဆောင်မှုသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက် သင့်သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။